တောင်သမန်သားလေး: August 2014
မရှိမဖြစ် မြန်မာ Android App များ
4:22 AM Android No comments
ဒီ Tools တွေကတော့ Android Device တွေမှာ မြန်မာစာ နဲ့ ကီးဘုတ် မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့
သူတွေ အတွက် အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်...ဟဲဟဲ...(ပိုက်ပိုက်ကုန်သက်သာတာပေါ့နော်)
အောက်ပါ Link များတွင် Download ဆွဲယူနိုင်ပါတယ်....
MMAS Zawgyi Changer2v1.0
Zawgyi Installer (Root) 1.0 RC6
Frozen Keyboard 1.3.3
Google Play Installer v1.0
Mynamar Mobile App Market 1.0
Smart Zawgyi Installer Beta(2)
Internal Memory နဲတဲ့ဖုန်းတွေမှာ Memory မြှင့်နည်း
မိမိဖုန်းက internal memory နဲနဲလေးပါတဲ့ဖုန်းဆို အရမ်းစိတ်ညစ်ရပါတယ်...app နဲနဲလေးထည့်လိုက်တာနဲ့ပဲ
ပြည့်သွားပါတယ်... link2Sd တွေကလည်း အာရုံနောက်ပါတယ် ဟီး
1. ဖုန်းက Root လုပ်ထားရပါမယ်
2.Root Explorer လေးလိုပါတယ်..
1. Root Explorer ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
2. system/etc folder ဆီသွားပါ..ထိပ်နားလေးက rw(read/write) ကို touch လုပ်ပြီး mount လုပ်ပါ
3. vold.fstab file လေးကိုရှာပြီး SD card ထဲကို ကော်ပီလုပ်ပါ။
4. ဒီအဆင့်က Text Editor တစ်ခုခုနဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်က pc ပဲအားရလို့ pc နဲ့လုပ်ပါတယ်
5. အောက်ကစာသားလေးတွေကိုရှာပါ။ မျဉ်းတားပြထားပါတယ်
6. sdcard ဆိုတဲ့နေရာကို ext_card လို့ပြင်ရေးပါ ext_card ကိုတော့ sdcard ဆိုပြီး ပြင်ရေးလိုက်ပါ။အောက်ကအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။.
7. ပြီးရင် ဖုန်းက system/etc ကိုပြန်သွားပြီး vold.fstab file ကို vold.fstab.old လို့ပြောင်းလိုက်ပါ။
8.စောစော Text တွေ Edit လုပ်ခဲ့တဲ့ vold.fstab file ကို ဒီနေရာမှာ paste လုပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် အဲ့ဖိုဒါပေါ်ကို ခပ်ကြာကြာလေးဖိပြိး “rw_r_ _r_ _” permission လေးယူပါ။
9. ပြီးရင် ဖုန်းကို Reboot ချလိုက်ပါ။
အကုန်ပြန်ပြောင်းမယ်ဆို အသစ်ထည့်ထားတဲ့vold.fstab file ကိုဖျက်ပြီး နာမည်ပြောင်းထားတဲ့ vold.fstab.old fileကို vold.fstabလို့ပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲ ... Reboot ချပေးလိုက်ပါနော်
ကျွန်တော် Huawei Y220t လေးမှာ လက်တွေ့စမ်းသပ်ထားပါတယ်
Written by HanWaiLinn-www.sayyoethe.blogspot.com
Android သမားတွေအတွက် လုံခြုံရေး အကြံပေးချက်များ
Public Wifi တွေဟာလှုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ တစ်ထစ်ချပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဆီမှာ ခေတ်စားလာတော့မယ့် Onlin Banking စနစ်တွေကိုသုံးတော့မယ်ဆို ဒီလို Public Wifi field တွေမှာ အသုံးပြုတာဟာ အန္တရယ်များပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိမိအိမ်က ဖုန်းData plan နဲ့သုံးခြင်းက ပိုစိတ်ချရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ public wifi ဆိုတာ လူပေါင်းများစွာသုံးကြတာဖြစ်လို့ စိတ်ချလို့လုံးဝမရပါ..သာမန် အသုံးပြုတာလောက်က ကိစ္စမရှိပေမယ့် Banking စနစ်တွေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်မချရပါ။ ကျွန်တော်လည်း cyber security သမားမဟုတ်ပါ။ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့အရေးကြီးအချက်အလက်တွေ အွန်လိုင်းမှာသုံးရ တော့မယ်ဆိုရင် သင့် password တွေဟာ bank's sever ဆီကို ပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိ private ပေါ်မှာသာလုပ်ဆောင်ခြင်းက အန္တရယ်ကင်းပါတယ်။
ဒီအချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူတွေနဲ့သိပ်မကိုက်ပါဘူး။ အပြင်က app တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်မဖြစ်မနေသုံးကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် unknonwn sources ကို မအွန်ဘဲမထားနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် ဒီရဲ့အကျိုးဆက်တွေကလည်းရှိနေပါတယ်။ Android market က app တွေဟာ တစ်ချိန်လုံးလုံခြုံရေးမြင့်မားစွာစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပြီး user တွေကို အနည်းငယ် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတာနဲ့ မားကက်မှ လုံးဝဖျက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီတော့. မားကက်မှ တရားဝင်ဒေါင်းလုပ်ယူတဲ့ app တွေဟာ အန္တရယ်မရှိပါဘူး။ဒီလိုမဟုတ်ဘဲအပြင်ကကောင်တွေယူမယ်ဆိုရင်တော့malware အန္တရယ်တွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။app နောက်ကွယ်ကထည့်ပေးလိုက်တဲ့ code အချို့ကနေ user အချက်အလက်တွေကိုရယူသွားတာမျိုးတွေပါ။ ဒီတော့ ခြုံပြောရရင်တော့ မားကက်မှ app များကိုသုံးစွဲခြင်းကသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Android ဆိုတာ Google ကထုတ်တာပါ။ဒါကြောင့် OS မှာပါလာတဲ့ မူရင်း Browser Chrome ကိုသုံးခြင်းက သင့်ကိုပိုမိုလုံခြုံစေမှာပါ။ မိုဘိုင်းမှာပါတဲ့ chrome က ပိုမို လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ထားတယ်လိုလည်း Google ကဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Google service မပါတဲ့ ဖုန်းတွေမှာတော့ Chrome ကို default ပါမလာပါဘူး
ဒါတွေကတော့ မိမိ android ကို လှုံခြုံစွာ သုံးနိုင်ဖို့အကြံပြုချက်တွေထဲကအချို့ဖြစ်ပါတယ်။ Begineer တွေအတွက် ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
★★ Latest Google Play Store 4.8.20 Apk (+Mod)(All Android) ★★
ကျွန်တော့် gmail ထဲကနေပြီး Play Store တင်းပေးဆိုပြီးတောင်းလာတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ရယ်
ပြီးတော့ android ဖုန်းတွေမှာ Google Play Store မရှိသေးတဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက်ရယ်
Latest Google Play Store 4.8.20 Apk (+Mod) လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါယ်နော် ။
ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့လူတိုင်းအတွက် Google Play Store ဆိုတာမရှိမဖြစ်
အဓိကနေရာကနေပြီးအရေးပါလှပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ online ထဲကနေပြီး
မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဂိမ်းတွေ ဖုန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ application လိုသလောက်ရှာနိူင်ဖို့ရယ် နောက်ပြီး
video တွေ သတင်းတွေကအစရယူနိူင်ဖို့အတွက်တွေပါအသုံးဝင်လှပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ကလဲ
တခုခုလိုရင် Play Store ကိုပဲအားကိုးရတာပါ ဒါကိုလဲဖုန်းသုံးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးသိကြမှာပါ
ရှိလဲရှိကြမှာပါ ။ ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ဆိုတာကလဲတောင်းလာတဲ့သူတွေရှိတာရယ်မရှိသေးတဲ့သူတွေ
အတွက်ရယ်ရွယ်ပြီးတင်ပေးတာဖြစ်ပြီး version လေးကလဲ 4.8.20 ဖြစ်နေတာရယ်ကြောင့်တင်ပေးလိုက်
ရတာပါ ။ဖိုင်ဆိုဒ်က 6mb လေးပဲရှိပြီး android ဖုန်းအားလုံးမှာအသုံးပြုနိူင်ပါတယ် ။
★★ Folder Lock Version : 1.0.9 (All Android) ★★
ဖုန်းထဲမှာဒီဆော့ဝဲထည့်ထား အင်တာနက်လိုင်းအားမြင့်လာမယ် - Root Firewall Pro APK ( For Rooted Androids )
Mobile ဖုန်း Hardware ပိုင်းလေ့လာနေသူတွေအတွက် ElectroDroid Pro v3.6.apk
ဒီတစ်ခါတော့ဖုန်း hardwareပိုင်းကိုလေ့လာနေကြသူများနဲ့ဖုန်း Hardwareပိုင်းserviceသမားတွေအတွက် မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ apkလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒိကောင်လေးကတော့ Resistor Ratio တွေ Resistor color code တန်ဖိုး.အပြင်တစ်ခြားသော တွက်ချက်မှုတွေကို အလွယ်တစ်ကူပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Calculator အပိုင်းမှာတော့Resistor color code decoder;SMD Resistor Code;• Inductor color code decoder; Ohm’s law calculator; Reactance/Resonance calculator; Voltage divider စတာတွေအပြင်တစ်ခြားသော တွက်ချက်မှုပေါင်းများစွာကို ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်Pin out အပိုင်းမှာလဲ USB, Serial, Parallel, Ethernet, RJ, SCART, DVI, HDMI, S-Video, VGA, VESA, Display Port, FireWire, Apple 30-pin စတာတွေအပြင် တစ်ခြားသောcableတွေ connector တွေ ကိုစုံစုံလင်လင်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခြားfeatureတွေလည်းစုံစုံလင်လင်ပါဝင်လို့
★★ PrinterShare Mobile Print Premium v9.5.1 Apk (All Android) ★★
မိမိရဲ့ android ဖုန်းကနေပြီး ဓာတ်ပုံတွေ pdf ဖိုင်တွေကို Printer နဲ့တွဲပြီးထုတ်ပေးနိူင်တဲ့ PrinterShare Mobile Print Premium v9.5.1 Apk လေးလာပါပြီဗျာ ။ ဒီကောင်လေးကတော့မိမိဖုန်းထဲကရှိသမျဓာတ်ပုံ
တွေ online ထဲကနေပြီး download ဆွဲယူထားတဲ့နည်းပညာလေးတွေရေးထားတဲ့ pdf ဖိုင်လေးတွေ
မိမိဖုန်းထဲမှာပဲမိမိကိုယ်တိုင်ရေးပြီးစုထားတတ်တဲ့မှတ်စုလေးတွေကို Printer နဲ့အပြင်ကိုထုတ်ချင်တဲ့
ဘော်ဒါတွေအတွက် အရမ်းကောင်းပြီးဆောင်ထားသင့်တဲ့ apk လေးပါပဲဗျာ Printer နဲ့တွဲလို့ရတဲ့
WiFi,နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Bluetooth, USB တို့နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအသုံးဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ့ ဖိုင်ဆိုဒ်က 2mb
ပဲရှိပြီး Android: 1.5 နှင့်အထက်ဖုန်းတွေမှာအသုံးပြုနိူင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ့။
• Printatest page to ensure compatibility;
• Print via Google Cloud Print (including save as PDF);
• Print 20 pages in Remote mode over the Internet.
မိမိဖုန်းထဲမှာ ရာသီဥတုကို အလန်းလေးကြည့် မယ် Weather Services PRO v2.4pro APK
Phone Screen ပေါ်မှာ Weather Widget လေးတွေထားချင်သူများအတွက် Weather Services PRO နောက်ဆုံး ထွက် Version လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့ Weather Widget လေးတွေကလည်း တကယ်လန်း ပါတယ်ဗျာ။ နမူနာကြည့်နိုင်အောင် Screen
Shot တွေကိုအောက်မှာ ပြပေးထားပါတယ်။ Android OS 1.6 နှင့် အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Download ►: ►''Link ''
သာယာလှပသောညချမ်းလေးမှာ ငှက်တွေပျံသန်းပြိးလုပ်ပေးမယ် Sunset Hill Pro Live Wallpaper v1.0.1 APK
Android phone/Tablet ကိုင်ဆောင်သူများအတွက်တော်တော် live Wallpaperလေးကိုကျနော်တင်းပေး
လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးလိုထင်ပါတယ်ပါတယ်ဗျာ။ ခေါင်းစဉ်လေးဖတ်ကြည့်လိုက်
ရုံသတ်သတ်နှင့်သိလောက်ပါတယ်။ ဒါပဲမဲ့နည်းနည်း တော့ကဗျာဖွဲ့လိုက်အုံးမယ့်နော်..ခိခိ..ခိ.ဟေ. ဟိ။
ညနေချိန်မှာကဗျာဆန်ဆန်လေး ငှက်ငှက်တွေပျံသန်းနေတယ်အချိန်မှာ နေရောက်းခြည်ကလည်း အချစ်တွေကို၏ နှလုံးသားတွေထိခိုက်သွားစေ ခံစားချင်းတယ်သူအတွက်အတွက်တော့ဗျာ ဒီlive Wallpaperက
အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ။အသုံးပြုပုံစံလေး= Home -> Press Menu -> Select Wallpapers -> Select Live Wallpapers -> Select Sunset Hill (Pro) from the list ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီlive Wallpapersလေးကိုတော့
Android O/S 2.2 အထက်ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
♪ ဖုန်းခေါ်ဆိုရာမှာ ရောင်စုံမြန်မာ ဂဏန်းလေးတွေနဲ့အရမ်းဆန်းတဲ့ (မြန်မာစတိုင်ကီးပတ်လေးပါ) ♫
Friday, August 29, 2014 Pyae Phyo (MMiTD)
Credit to ==> http://www.shwemoenyo.com
♪ Eng Ring Tone အသစ် 100 ကျော် - English Ring Tone Selection Part-2 ♫
Saturday, August 30, 2014 Pyae Phyo (MMiTD)
English Ring Tone ပေါင်း 100ကျော်ကိုနောက်ထပ် စုစည်းပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ June လတုန်း ကလည်း Part-1 ကိုတင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ လူကြိုက်များပြီး Popular Post နေရာမှာ ထိပ်ဆုံးကရပ်တည်နိုင် ခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း Part-2 အနေနဲ့ နောက်ထပ် Ring Tone ပေါင်း 100 ကျော်ကိုထပ်တင်ပေး လိုက်ပါ တယ်ဗျာ။ အခု Ring Tone 100 ကျော်အားလုံးကလည်း လုံးဝ အသစ်တွေချည်းပါဘဲ။ ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေ စုဆောင်း ထားတာဖြစ်လို့ တော်တော်များများဆီမှာ မရှိသေးဘူး ဆိုတာ အာမခံ ပါတယ်ဗျာ။ Melody , Music အမျိုး အစားပေါင်းစုံလင်စွာပါဝင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် Part3ကိုလည်း မကြာမှီ တင်ပေးသွားမှာပါ။ Connection မကောင်းလို့ အပိုင်းတွေခွဲပြီးတင်ပေးနေရတာကို နားလည်ပေးစေချင်ပါ တယ်ဗျာ။
✏Samsung ၊ Iphone ၊ Sony ၊ HTC ဖုန်းကို အစစ်လားအတုလားစစ်ဆေးနည်း✏
-ခုနောက်ပိုင်း Samsung ၊ Iphone ၊ Sony ၊ HTC တဲ့နာမည် ကြီး Brand တွေကိုပုံစံတူခိုးပြီးရောင်းတာတွေ များလာပါတယ်။
အဲ့အတွက်ပုံမှန်ဆိုင်​တွေက​တော့အတု(clone )ဟုပြော ရောင်းသလို​ရောချတဲ့ဆိုင်တွေလဲရှိပါတယ်။အဲ့အတွက် စစ်ဆေးနည်းကိုဗဟုသုတအနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်။ မိမိသိပြီဆိုရင် မိမိတို့ရဲ့ သယ်ချင်းတွေပါတွေ့မြင် သိရှိရအောင်ကူညီမျှဝေပေးခဲ့ပါနော်။
အရင်တုန်းကပုံစံတူတွေထုတ်ပေမယ့် Java ဖြစ်တဲ့အတွက် ခွဲခြားရလွယ်သလိုပုံစံမှာလဲကွာခြားမှုရှိပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်း တွင် Clone Android တွေထွက်လာတော့ Brand က လဲ Android ဆို တော့ အတွင်း ပိုင်း ကို ခွဲ ခြား မရ အောင်တူ လာပါတယ် ။အပြင် ပိုင်း အရလဲ တော်တော် လေး တူလာပါတယ် ။ ပုံ မှန် ဖုန်း Service သမား အနေ နဲ့ သိ နိုင်သော် လဲ အပြင် လူ အနေ နဲ့ သို့ လော သို့ လော ဖြစ် စေ ပါတယ်။
အဓိက ကတော့ နိုင်ငံ ခြား မှာ ရောက်နေ တဲ့ မြန်မာ တွေ အတွက်ပါ ။အဲ့ မှာ ဆိုင် တွေ က ဘယ် နှစ် နှစ် အာမခံ ၊ ဗီယက် နမ် ထုတ် အစစ် စ သဖြင့် လိမ် ရောင်း တာ ကို လက်တွေ့ ခံ ရတဲ့ သူတွေ ကို လဲ တွေ့ ဖူးပါတယ် ။
ခုစစ်ဆေး နည်း ၃ နည်းပြော ပြ ပါမယ် ..
၁။ အမြင် အား ဖြင့် ဆုံး ဖြတ်ခြင်း
ကျန်တာ တွေ ဘယ်လောက်တူတူ ရုပ်ထွက် က တော့ အရောင် က ပုံမှန် ထက် လျော့ ပါတယ် ။
၂။ ကုဒ် နံပတ် များ သုံး စစ်ဆေး ခြင်း
၃။ IMEI ဖြင့် စစ် ဆေးခြင်း ( All Brand )
*#06# ကို နိုပ်ပြီး ဖြစ် စေ ၊ နောက်ဖက် ကျော ဘက် ဓာတ်ခဲ ဖယ်လိုက် ရင် လဲ ကပ် ထား တဲ့ စာထဲ မှာ IMEI ရှိပါတယ် ။
15 လုံးရှိပါတယ် ။အဲ့ နံပတ် ကို မှတ် ပြီး
Android ဖုန်း မှာ စစ်ဆေး နိုင်ရန် IMEI check by MH Application ကို အသုံးပြု ပြီး ဖြစ်စေ
အောက်က လင့် တွင် ကွန်ပြူတာနှင့် ဖြစ် စေ စစ်ဆေး နိုင်ပါတယ် ။
စစ်ဆေးပုံက Enter IMEI number below အောက် က အကွက် ထဲ တွင် မိမိ ဖုန်း ရဲ့ IMEI နံပတ် ကို ရိုက် ထည့် ပြီး analyse ကို နှိပ် လိုက်ပါ ။ ဒါဆိုရင် အောက်ပါ ပုံလေးအတိုင်း တွေ့မြင်နိုင်ပါပြီ။ အဆင်ပြေ ကြပါစေ...
IMEI check by MH For Android ဆော့ဝဲဒေါင်းယူရန်
credit >>Mobile House
မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် laptop ပါဝါကြိုး ၆ သန်းကျော်ကို HP ပြန်လည်သိမ်းဆည်း
အပူလွန်ကဲမှု ဖြစ်ပွားပြီး မီးလောင်နိုင်သောကြောင့် Compaq notebook များ၊ အသေးစား notebook ကွန်ပျူတာများနှင့် docking station များကဲ့သို့ AC adapter ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်သော ပါဝါကြိုး ၆ သန်းကျော်ကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းသွားမည်ဟု Hewlett-Packard မှ ကြေညာခဲ့သည်။
အဆိုပါ ပါဝါကြိုးကို LS-15 ဟုခေးဆိုပြီး ၎င်းသည် အနက်ရောင်ဖြစ်ကာ AC adapter ၏ အဆုံးတွင် LS-15 ဟု တံဆိပ် ရိုက်နှိပ်ထားသည်။ ၎င်း ပါဝါကြိုးများသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ ထုတ်လုပ်ခဲ့သော HP laptop များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်သည်။
“ံHP က အပူလွန်ကဲမှုကြောင့် အရည်ပျော်ပြီး အသေးစား မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့ တိုင်ကြားချက် ၂၉ ခုနဲ့ အသေးစား ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပွးတဲ့ တိုင်ကြားချက် ၁၃ ခုကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်” ဟု HP ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ HP က ပါဝါကြိုးများ ပြန်လည် သိမ်းဆည်းခြင်းသည် ပထမဦးဆုံး အကြိမ် မဟုတ်ပေ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကလည်း HP Chromebook 11 ၏ ပါဝါကြိုးသည် အပူလွန်ကဲမှု ဖြစ်ပွားသောကြောင့် ဆိုင်များမှ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခဲ့ရကြောင်း Google နှင့် HP တို့မှ ဝန်ခံပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အပူလွန်ကဲမှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိပြီး ပစ္စည်းဥစ္စာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက် HP notebook ဘက်ထရီများကိုလည်း ပြန်လည် သိမ်းဆည်းခဲ့ရသည်။
HP ကုမ္ပဏီကမူ LS-15 ပါဝါကြိုး သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့ကို သုံးစွဲနေမှုအား ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းပြီး ကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်သွယ်ကာ အခမဲ့ လဲလှယ်သင့်ကြာင်း အကြံပြုထားသည်။
♪ ဖုန်းထဲမှာ MP3 အဖြစ် Convert လုပ်ပေးမယ့် - Vid2mp3 – Video Mp3 Converter v3.4 Apk ♫
Video သီချင်းများကို Audio MP3 အဖြစ် Convert လုပ်ပေးနိုင်မယ့် Application လေးတစ်ခုတင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဖုန်းထဲမှာတင် Convert လုပ်ဖို့ App တွေတင်တာနည်းလာလို့ လိုအပ်တဲ့ ဘော်ဒါများအသုံးပြုနိုင်အောင်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ Convert လုပ်နေးနိုင်တဲ့ Quality ကလည်း အသံထွက်မှာ မူရင်အတိုင်းမပျက်ဘဲ ရှိနေစေမှာပါ။ အသုံးပြုရတာလွယ်ကူတဲ့အတွက် မရှင်းပြတော့ပါဘူး ဗျာ။ အသေးစိတ်ကို အောက်မှာရှင်းပြထားပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.2 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြု နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
♪ ရေးကြီးတဲ့ အလုပ်ကိစ္စတွေကိုမှတ်သားပေးမယ့် - Business Calendar Pro v1.4.7.3 Apk ♫
အခုကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တဲ့ Application လေးကတော့ မိမိရဲ့ တစ်နေ့စာ တစ်ပတ်စာ တစ်လစာ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အလုပ်ကိစ္စတွေ ၊ ချိန်းထားတဲ့ နေ့တွေ အချိန်တွေ ၊ စတာတွေကို မှတ်တမ်းလေးတစ်ခု လုပ်ပြီးမှတ်နိုင်တဲ့ Application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Calender မှာ မိမိအရေးတကြီး လုပ်စရာရှိ တဲ့နေ့တွေကို ရွေးပြီး အရောင်နဲ့အမှတ်အသားလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ရက်ချင်းစီကိုလည်း အကြောင်းအရာ များရေးပြီး အသေးစိတ်မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။ သတိမေ့တက်သူများနဲ့ လုပ်ငန်းကြီးလုပ်နေသူများ အတွက် ပိုပြီးသင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်မှာ Screen Shot တွေ စာတွေနဲ့ ရှင်းပြ ထားပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မရှိမဖြစ် မြန်မာ Android App များ 4:22 AM Android...
★★ Latest Google Play Store 4.8.20 Apk (+Mod)(All ...
မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် laptop ပါဝါကြိုး ၆ သန...
♪ ရေးကြီးတဲ့ အလုပ်ကိစ္စတွေကိုမှတ်သားပေးမယ့် - Busin...
Sony Xeria p အမြင့်ဖုန်းတော်တော်များများကို Rootေ...
✏Knockr-v1.5 Apk and Soft Lock Screen apk v2.2(for...
အိုင်တီပစ္စည်း အ၀ယ်လမ်းညွှန် (၂)
ကျနော်အကြိုက်ဆုံး Firefox 32 Internet Browser for ...
Samsung တွေဖုန်းတွေကို အတုအစစ် စစ်ဖို့
ဓါတ်ပုံတွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ - Photo Edi...
♪ Viber ကို ကျင်လည်စွာ အသုံးချနိုင်မယ့် နည်းလမ်းမျ...
♪ Galaxy S5 အသုံးပြုသူများ သိထားသင့်သည့် အချက် (၁၀...
ဖုန်းဘက်ထရီကို အမြန်ဆုံးအားသွင်းဖို့ အကြံပေးချက်မျ...
Youtube ထဲက video တွေဇာတ်ကားဒေါင်းဖို့TubeMate You...
ရုပ်ပုံ၊ဓါတ်ပုံပေါ်မှာ ကဗျာလေးတွေ၊စာသားလေးတွေ ရေးနိ...
♪ Wifi Password Hack ချင်သူများအတွက် Wifi Password...
✏သင့် Viber ကို အချိန်ဇယားဖြင့် လိုသလို Offline လု...
♪ Phone Call အတုတွေဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် - Fake Call ...
VideoShow: Video Editor &Maker 3.1.2 APK
♪ CWM ခေါ် Clock Work Mode Recovery Rom နဲ့Androi...
★★ WiFi File Transfer version 1.0.9, Apk (All Andr...
★★ Photo Locker Pro version110 Paid (All Android) ...
♪ မြန်မာ့ရိုးရာ စတစ်ကာများ အသုံးပြုနိုင်မည့် MyCha...
♪ မှော်ဝင်ဆန်တဲ့ပန်းလေးတွေရဲ့လှပတဲ့ Live Wallpaper...
♣samsung ဖုန်းတွေမှာ software dead ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လ...
Android v 4.3, 4.4ဖုန်းတွေအတွက် Root လုပ်စရာမလိုပဲ...
♪ Samsung ၊ Iphone ၊ Sony ၊ HTC ဖုန်း ကို အစစ် လား...
ကောသလ အိမ်မက် for Android
ဗီဒီယို Recorderဖုန်းနှင့်ပြန်လည်အမျှဝေပေးသူအတွက် ...
သီင်္ချင်းနားဆင်၇န်အသုံးပြုရမည့် ZPlayer v4.01 APK
♪ FaceBook မှာသင့်ချစ်သူဒါမှမဟုတ် VIP တစ်ဦးဦး On...
အော်ရီဒူး အင်တာနက် Package Plan အသစ်ကြေညာ 21 Augus...
✏Easy Language Translator v1.9✏
✏Data Usage Defender v2.1.1✏
China Android Phone ထဲက တရုတ်ဝေါဟာရများကို အင်္ဂလိပ်...
ဖုန်း Call အပြင် Viber, Skype, Tango တို့ကိုအသံဖမ်...
အသုံးဝင် နည်းပညာ စာအုပ်များ
✏Titanium backup v6.2.0 Apk & PRO Key App✏
✏System Cleanup v4.82(android)✏
✏Text Now v2.8.6.2(for android)✏
Android OS အသုံးပြုသူများအတွက် Tuibo ဆိုသည့် App
live Wallpaper ကို နှင်းဆီးပန်းလေးနဲ့ Apk သုံးကြမယ...
♪ မိမိဆီဖုန်းဝင်လာရင် " ဖုန်းမအားသေးပါလို့ဖြေဆိုပေ...
ဒါလေးကတော့ Window XP&Window7အမြန်တင်နည်းလေးပါ
Myanmar Digital Clock Widget V1.03
Honor 3C 4.4.2 မြန်မာစာ မမှန်ခြင်း အချို့ကို ရှင်း...
location-based service (တည်နေရာအခြေခံ ဝန်ဆောင်မှု (...
★★ Fatten Face – Fat Face Version: 1.0 (All Androi...
Fast Racing 3D Mod APK V1.1 Unlimited Money
♪ ခပ်မိုက်မိုက်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ - TSF Shell 3D Launc...
★★ Fotos – Photo Overlapping Version: 4.0.1 Apk (A...
★★ ကွန်ပြူ တာအခြေခံအဆင့်မှသည် ကျွမ်းကျင်အဆင့်ဆီသို...
♪ အရေးကြီးတဲ့ဖုန်းဝင်လာရင် လက်မလွတ်စေဖို့ Essentia...
Samsung Galaxy Note4၏ အချက်အလက်များ အွန်လိုင်းတွ...
ISIS ဆိုတဲ့ အစ်စလာမ်ဘာသာအစွန်းရောက် စစ်သွေးကြွအဖွဲ...
✏ကို​ဇော်​သွင်​နည်းပညာBlog Apk v1.0✏